Archive du 20180710
Fanalam-baraka ny Ben’ny tanàna Hametraka fitoriana ny CUA
Nezahina naely tamina haino aman-jery vitsivitsy nanomboka ny herinandro teo ny fanosoram-potaka ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ho nivarotra ny tany misy ny CEG etsy Analamahitsy.
Jean Eric Rakotoarisoa « Tsy ny HCC mihitsy no hanakorontana eto »
Vonona hanatanteraka ny anjara andraikiny amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana (HCC) raha araka ny nambaran’ny filohany Jean Eric Rakotoarisoa omaly.
Firaisankina ho an’i Madagasikara “Mifanohitra amin’ny lalàna io datim-pifidianana io »
Mitaky ny hampiatoana ireo fanapahan-kevitra mifanohitra amin’ny lalàna velona ny Vovonana Firaisankina ho an’i Madagasikara. Lohalaharana amin’izany ny datim-pifidianana, indrindra fa ny fihodinana faharoa amin’ny 19 desambra ho fanajana ny voalaza ao amin’ny andininy faha-167 amin’ny lalàmpanorenana.
Praiminisitra Ntsay Christian “155 miliara ariary no efa natokana ho an’ny mpampianatra”
Tonga nanatitra nivantana ny antontan-taratasy misy ny fanambaram-pananany teny amin’ny biraon’ny HCC eny Ambohidahy omaly tolakandro ny praiminisitra Ntsay Christian.
Kandida filoham-pirenena Hifampidera ny vazahany
Raha hatopy any amin’ireo mpitondra telo nifanesy izay tombanana fa samy ho kandida ny fandinihana sy fampitahana amin’izao, dia hahafaha-mitsara an’i Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina ary Hery Rajaonarimampianina ny nataony sy ny politika nampihariny ary ny ny firenen-dehibe mpiara-dia taminy tao anatin’izay.
CENI Madagascar Hiroso amin`ny fanapariahana ny lalàna fehizoro vaovao
Tsy mihemotra intsony ny fifidianana ary efa miroso amin`ny fikarakarana ny fanatanterahana azy ny eo anivon`ny governemanta sy ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI).
Antoko Avana Mitaky fanisana voka-pifidianana tamin'ny 2013
Nivoitra nandritra ny fihaonan’ny mpikambana antoko Avana tao amin'ny kaominina Ampasikely fa mitaky ny famerenana ny fanisam-bato tamin'ny fifidianana 2013 izy ireo.
Agence immobilière Maina ny tsena hatramin’ny nisian’ny krizy
Maina tanteraka ny tsena teny anivon’ireo ivontoerana fitadiavana trano hofaina na tany hovidiana eto amintsika hatramin’ny nisian’ny krizy teto amin’ny firenena, efa ho roa volana mahery izao. S
Baolina kitra Vehivavy Malagasy Hanomboka anio eny Carion ny dingana faha-2
Hanomboka anio talata 10 jolay 2018 eny amin’ny kianja sentetikan’i Carion ny dingana faha-2 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ i Madagasikara eo amin’ny baolina kitra vehivavy ka tsy hifarana raha tsy ny 22 jolay ho avy izao.
Fanaovana tsinontsinona ny mpampianatra Tsy azo ekena, hoy i Maitre Olala
Nivondrona sy naneho ny alahelony tetsy an-tokotany malalaky ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena Anosy indray omaly ireo mpampianatra mivondrona ao anatin’ny mandatehezan’ny fanabeazana.
UPRIM sy ny masoivohon’i Afrika atsimo Hiara-kiasa akaiky hanatsarana ny fanabeazana
Hiara-kiasa akaiky manomboka izao ny masoivohon’i Afrika Atsimo sy ny sekoly ambony UPRIM manerana ny Nosy.
Mpianatr’i Vontovorona Voadaroka lakrimozena ihany koa
Resaka vatsim-pianarana, tsy fivoahan’ny karaman’ny mpampianatra sy ny olana hafa noho ny rafitra LMD, izay tsy arahina fepetra mifanaraka amin’izany no nampitroatra ireo mpianatra teny amin’ny Politeknika Vontovorona omaly.
Tsy te hahalala ny mpampianatra 500 000 ariary ny karama
Nafana ny tolon’ny mpampianatra teny amin’ny tokotanin’ny minisiteran’ny fanabeazana Anosy omaly.
Sekoly St Vincent de Paul “Tsy hanaovana tranombarotra izany”, hoy ny DIDEC
Nanao fanambarana omaly ny teo anivon`ny DIDEC na ny foibem-pianarana katolika manoloana ny fanakatonana ny sekoly Saint Vincent de Paul etsy Ambatonilita.
Famatsiam-bola FEC andiany fahefatra Hodinihina amin’ny alarobia izao ny famotsorana azy
Omaly no natao ny lanonana fanaovam-beloma an’i Patrick Imam, solontena maharitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) nonina teto Madagasikara.
Raoul Arizaka Rabekoto Misokatra sy miasa miaraka amin’ny rehetra
Seminarista niaraka tamin-dry Mgr Jean Claude Randrianarisoa Evekan’i Miarinarivo sy ry Mgr Jean De Dieu Raoelison ny tale jeneralin’ny CNaPS Raoul Arizaka Rabekoto.
Olan’ny fananan-tany Hihaona amin’ny minisitra ny depiote Naivo Raholdina
Sambany hiditra ny birao fiasan’ny minisitra Mapar Razanamahasoa Christine anio ny depiote Naivo Raholdina , filohan’ny vaomiera mpanadihady ny olana amin’ny fananan-tany eo anivon’ny Antenimieram-pirenena, araka ny nambarany tamin’ny mpanao gazety teny Tsiazotafo-Ambondrona omaly.